यौन शिक्षा : यौनका सम्बन्धमा किशोरकिशोरीहरूको जिज्ञासा कसरी समाधान गर्ने
यौन शिक्षा (Sex education) एक विस्तृत संकल्पना हो जुन मानव यौन अंगहरू, जनन, संभोग अथवा रति क्रिया , यौनिक स्वास्थ्य, जनन-सम्बन्धी अधिकारहरू र यौन-आचरण सम्बन्धी शिक्षाबाट सम्बन्धित छ । माता-पिता र अभिभावक, मित्र-मण्डली, विद्यालयी पाठ्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकताको कार्यक्रम आदि यौन शिक्षाको प्रमुख साधन हुन ।
किशोर अवस्था र यौन शिक्षा
यौनसम्बन्धी ज्ञान दिनुपूर्व यौनको आवश्यकता, महत्व र प्राथमिकताका सम्बन्धमा बुझाउनु पर्छ । यौनका सम्बन्धमा डर, त्रास देखाएर भ्रममा पार्नुहुँदैन । यौन शिक्षाको अर्थ संभोग कला बुझाउनु मात्र नभएर त्यससँग सम्बन्धित सबै व्यवहार परिवर्तन, आवश्यकता आदि विषयमा बुझाउनु एवं सतर्क गराउनु हो । यसो नभए गलत धारणा वा भ्रम सिर्जर्ना हुने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा हीन भावना बढनसक्छ र उनीहरूको आत्मविश्वास पनि घट्नसक्छ । किशोरकिशोरीहरूले यस्ता पुस्तक, इन्टरनेट, पोर्ने साइटको वा गलत संगतले यौनका सम्बन्धमा आधा, अधूरो वा गलत ज्ञान आर्जन नगरून् भन्ने विषयमा ख्याल राख्नुपर्छ । किशोरकिशोरीहरूले कस्तो चित्र हेर्छन ? टिभीमा कस्तो कार्यक्रम हेर्न रुचाउँछन् ? कस्तो चलचत्रि मनपराउँछन । इन्टरनेटको के—कस्तो साइड सर्च गर्छन ? फोनमा कोसित कस्तो कुरा गर्छन् ? कोठामा बस्दा एक्लै के गर्छन् ? राति किन अबेरसम्म बस्छन् ? आदि कुरा राम्रसँग बुझी एक्लै भएको अवस्थामा सम्झाउनुपर्छ । सबैका सामु यौनसम्बन्धी कुरा गर्दा गलत सन्देश जान सक्छ ।